ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: သတင်းပလင်း
ဟုတ်တယ်.. ခုတလော ကြားရတဲ့ သတင်းတွေက စိတ်မကောင်းစရာတွေ ချည်းပဲ..၊ ကျနော်လည်း စာရေးဖို့ကို အတော် အချိန်လုနေရတယ်၊ ညီ ပြောသလိုပဲ..၊ အချိန်က ဘာတွေနဲ့ ကုန်လို့ ကုန်သွားမှန်းတောင် မသိနိုင်အောင်ပဲ....၊
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် တစ်ယောက်တည်းနေရင်းတောင် စိတ်ညစ်စရာတွေ များရတဲ့ကြားမှာ သတင်းဖွင့်ကြည့်လိုက်တိုင်း ဟိုနားကသေ သည်နားကသတ်နဲ့ စိတ်ဆင်းရဲလွန်းလို့ ဘယ်နားသွားနေရမှန်းကိုမသိတော့တာ...ဘယ်ဘာသာရေးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် သတ်တာဖြတ်တာကိုတော့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုံ့ချတယ်ဟေ့...
ဘာသာတရားဆိုတာ လူ့ ဘောင်လောက အေးချမ်းဖို့့ စိတ်နှလုံး ခွန်အားဖြစ်စေဖို့ ပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်...အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်ခြင်း ကင်းဝေးပါစေ...ကမ္ဘာကြီး ငြိမ်းအေးပါစေ...
လွမ်းရေး. ဝမ်းရေးနဲ့ ပြည်ထဲရေးတွေအကြားဗျာမများရအောင် တရားလေးမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်မောင်မျိုးရေ. စိတ်ကိုညစ်နွမ်းစေမယ့်သတင်းတွေ စိတ်ဓါတ်အင်အားကျဆင်းစေမယ့်သတင်းတွေကိုfilterလုပ်ဖတ်. ပျော်ရွှင်စိတ်ချမ်းသာပါစေ
သတင်းတွေစောင့်ကြည့်မှ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ နေရာအနှံ့မှာ နေ့တိုင်း ဗုံးတွေ ဖောက်ကွဲခံနေရတာ..။ အပြစ်မဲ့သူတွေ သေကြေနေရတာ..။ ဗြမ္မာစိုရ်တရားတွေ ခေါင်းပါးလာကြတာ..။ စိတ်မအေးစရာ..။